ASA SORATRA : Namelabelatra momba ireo mpanoratra vaovao aty Mahajanga Michèle Rakotoson
Ny zoma tolakandro teo no nihaona tamin’ireo mpianatra sy mpampianatra mpandalina sy tia literatiora taty Mahajanga ny mpanoratra fanta-daza Rakotoson Michèle. 26 mars 2018
Tao amin’ny trano fivarotam-boky Millefeuille no nitafatafany tamin’ireo tia asa soratra sy tia hainteny.
Nampahafantatra ny tantaran’ny soratra teto Madagasikara izy na nilazalazany fa ny fiandohan’ny taonjato faha-19 dia nisy ny fifaninanana masina teo amin’ny fivavahana silamo sy kristianina teto Madagasikara. Soratra arabico Malagasy na sorabe no soratra voalohany teto Madagasikara, nijanona ho amin’ny asa soratra masina izy io fa ny misionera izay tonga tamin’ny 1820 no nanaparitaka ny soratra amin’ny teny latina.
Nanampy azy tamin’izany Radama I, ary anisan’ny nampiely ny soratra latina ny fanoratana ny Baiboly tamin’ny teny malagasy. Ny fomba fisainana, filazana zavatra sy fanehoan-kevitra tamin’izany dia nahitana taratra ny maha krsitsianina. Na ny roman voalohany aza dia misy moraly kristianina. Anisan’ny andrarezina amin’ny asa soratra Malagasy i Emilson Daniel Andriamalala na E.D Andriamalala sy Clarisse Ratsifandrihamanana.
Ireo Zezoita kosa dia namokatra mpanoratra maro toa an’ny père Venance Manifatra izay nanao asa fandalinana maro, na tantara na fomban-drazana. Betsaka ireo asa soratra no tokony haverina atonta, hoy hatrany Rakotoson Michèle.
Sarotra sy lafo ny ny mamoaka boky ankehitriny.
Efa misy ireo fikambanana mpanoratra toy ny Faribolana Sandratra, ny Havatsa UPEM ary fikambanana mpanoratra tanora maro izay mifanampy amin’ny fitadiavana lalana hanontana asa soratra sy boky. Efa maro ireo mpanoratra vao misondrotra toa an’i Patrick Andriamangatiana, Andry Andraina, Rija Rajaonah, Ranarivelo Noel sy ny maro hafa… Efa misy ihany koa fanampiana ireo mpanoratra Malagasy, ka tamin’ny Frankôfônia farany teo dia i Madagasikara irery no nahazo alalana hanoratra sy mamoaka boky amin’ny teny malagasy. Ireo mpanoratra vaovao rahateo dia misy ny tsy mianona amin’ny Malagasy ofisialy fa manafangaro amin’ny tenim-paritra ary maneho bebe kokoa ny haren’ny teny malagasy.
Miisa 10 ny boky efa nosoratan’i Michèle Rakotoson. Manoratra “chronique” ao amin’ny L’hebdo de Madagascar ihany koa izy, sady mpanoratra, mpanao gazety no mpandika teny. Mihodina eo amin’ny asa soratra ny fiainany ary mizara amin’ireo zanaka sy zandry izy aty aoriana.
Zazavavy maty natelin’ny renirano ny alahady 22 novambra lasa teo BEFOTAKA AVARATRA (337) 24 novembre 2020 Sarona ireo teti-dratsy goavana vitan’i Prudence FISOLOKIANA AO AMIN’NY FACEBOOK (172) 26 novembre 2020 Zanany sy zafikeliny ihany no nahafaty an’ilay pasitera FANAFIHANA TAO MIARINARIVO (160) 24 novembre 2020 Ben’ny tanàna teo aloha tratra anolana zazavavy tsy ampy taona ANTOBY- MIARINARIVO (114) 26 novembre 2020 Liana amin’ny fampandrosoana imasoan’ny Fitondrana ankehitriny BEN’NY TANANA TIM (86) 24 novembre 2020 « Ahiana ny mety hisian’ ny kolikoly », hoy ny Kmf/Cnoe LOHOLONA (83) 24 novembre 2020